Lalao Star Wars amidy amin'ny iOS sy Mac | Vaovao IPhone
Ny mpankafy ny Star Wars (fantatra amin'ny anarana hoe Star Wars) dia ao anaty vintana. Raha volana vitsivitsy monja miala ny premiere an'ny fizarana vaovao "The Force Awakens", izay hamely ny sinema amin'ny faran'ny taona izao, dia afaka mankafy ny lalao tsara indrindra amin'ny saga ho an'ny iOS sy Mac amin'ny vidiny miavaka ianao fankalazana alohan'ny Andro Star Wars manaraka izay hatao amin'ny 4 Mey. Noho ity tolotra ity dia afaka mahazo lohanteny toa ianao "Star Wars Knights of the Old Republic" ho an'ny iOS sy Mac amin'ny vidiny lafo. Asehonay anao eto ambany ny tolotra rehetra.
Ankalazaina amin'ny 4 Mey ny Andro Star Wars, daty voafidy hahafahana milalao teny amin'ny teny anglisy: "Homba anao anie ny fahefatra" (4 Mey homba anao) dia tena mitovy amin'ilay andian-teny malaza hoe "Enga anie ny hery hiaraka aminao" (Enga anie ny hery hiaraka aminao). Nanomboka tamin'ny 2011, tamin'io andro io ny fandefasana sarimihetsika manokana ny sarimihetsika an'ny saga dia natao tao amin'ny sinema, ary fifaninanana akanjo. Mitombo ny fisian'ity fialantsasatra ity amin'ny tambajotra sosialy ary efa manerantany ny fiantraikany.
Raha handeha hahaliana antsika amin'ity lahatsoratra ity isika dia ity no fotoana mety indrindra hampidinana ny lalao tsara "Star Wars Knights of the Old Republic" ho an'ny iOS, izay Matetika dia vidiana amin'ny € 9,99 ary mihena ho 2,99 € ankehitriny.
Star Wars ™: KOTOR€ 10,99
Raha mpampiasa Mac ianao, dia tsara vintana ihany koa, satria misy lohateny dimy nahena ho antsasaky ny vidiny, izay manasongadiko manokana ny "Star Wars Empire at War", iray amin'ireo lalao tiako indrindra ary azo antoka fa ireo tia ny fotoana tena izy lalao tetika. Avelako ho anao eto ambany ireo rohy rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Lalao Star Wars amidy amin'ny iOS sy Mac
Ahoana ny fomba hamafana ireo fampiharana amin'ny Apple Watch
Ireo bitsika 10 tadiavina indrindra tadiavin'ny mpisera Apple Watch